Su'aalaha la isweydiiyo - Tianjin Wodon Wear Resistant Material Co., Ltd.
Muunadaha, waqtiga hogaaminta waa qiyaastii 7 maalmood. Soosaarka baaxadda leh, waqtiga hogaamintu waa 20-30 maalmood ka dib marka la helo lacag-dhigashada. Waqtiyada hogaamintu waxay wax ku ool noqdaan marka (1) aan helnay deebaajigaaga, iyo (2) aan u haysanno oggolaanshahaaga ugu dambeeya ee alaabtaada. Haddii waqtiyada hoggaamineed aysan ku shaqeyn waqtigaaga kama dambaysta ah, fadlan ka gudub shuruudahaaga iibintaada. Xaaladaha oo dhan waxaan isku dayi doonaa inaan daboolo baahiyahaaga. Xaaladaha badankood waan awoodnaa inaan sidaas yeelno.
Waa maxay noocyada qaababka lacag -bixinta ee aad aqbasho?
Waxaan dammaanad qaadeynaa alaabtayada iyo farsamooyinkayaga. Ballan -qaadkayagu waa ku qanacsanaanta alaabtayada. Damaanad -qaadid iyo in kale, waa dhaqanka shirkadeena in wax laga qabto oo la xaliyo dhammaan arrimaha macmiilka si qof walba ugu qanco
Miyaad dammaanad qaadaysaa gaarsiinta alaabta ammaan iyo ammaan ah?